नफक्रिदै ओइलिएको माया :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
नफक्रिदै ओइलिएको माया
“प्लिज मलाई साथी बनाउनु है, मैले रिक्वेस्ट पठाएको छु।”, मैले फेरि मेसेज गरेँ।उताबाट ‘एसेप्ट’ भयो।मैले बोलीको शिलशिला अगाडी बढाउनको लागि फेरि लेखें, “धन्यवाद एसेप्ट गर्नु भएकोमा।”“ओक”, उनले छोटो जवाफ दिइन्।
आमा फेरि भन्न थाल्नुभयो “खोइ हेरुँ त, कस्ती रहिछ मेरी बुहारी?”मैले आमालाई उनको फेसबुकबाट ‘सेभ’ गरेको फोटो देखाएँ।
सरल भाषामा उत्तर फर्काइ, “राम्रो छ।”“कमेन्ट गर्दिनौ?”“मेरो कमेन्ट गर्ने बानी छैन।” मसँग जवाफ थिएन।फेरि, उनलाई सोधेँ, “के म भावनासँग भेट्न सक्छु?”“किन र?”
त्यही रात उनलाई मेसेज गरें, “के म आफ्नो साथीलाइ भेट्न सक्छु?”“किन र, केही काम थियो र?” उनको उत्तर। उत्तर भन्ने कि प्रश्न!
मैले लेखेँ, “तिमीलाई भेट्न मन लागेर नि!”ऊ अलि आनाकानी गर्न थाली। तर, अन्तिममा मेरै जीत भयो। भेट्ने निधो गरि।आउने शनिबार कुनै ‘कफी शप’मा भेट्ने ‘फिक्स’ भयो।
मभन्दा पहिले उ आइसकेकी थिई। मैले ‘हाइ’ भन्दै हात हल्लाएँ। ऊ पनि हात देखाउदै हाँसी। वेटर आयो। मैले २ कप कफी अर्डर गरेँ। कहाँबाट कुरा सुरु गरुँ भन्ने बहाना खोज्दै थिएँ। दुवैजना बोल्न नसकेर अकमक्क पर्दै थियौँ।वेटर भाइले कफी ल्याइदियो। कफी पिउन आग्रह गरेँ। उनले टाउको हल्लाएर ‘हुन्छ’ भनी। कफीको चुस्की लिँदै गर्दा मैले आँट गरेर भने, “भावना म तिमीलाई मन पराउन थालेछु। तिमी मेरो बारेमा के सोच्छौ, त्यो मलाई थाहा छैन। म तिमीलाई बिहेको प्रस्ताब राख्न सक्छु?”
मेरो प्रश्न नै सकिन पाएको थिएन, उसले आँखाभरि आँशु बनाई। मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो। उनी पिउँदै गरेको कफी छोडेर बाहिर निस्किन्। म छिटोछिटो कफीको पैसा तिरेर बाहिर निस्कँदा ऊ त्यो ठाउँबाट गइसकेकी थिई। मैले उसलाई यताउता खोजेँ तर पाउन सकिनँ। अनि, म घर फर्केँ। फोन गरुँ भने उनको फोन नम्बर मसँग थिएन। त्यसैले म उनलाई फेसबुकमा मेसेज गरे “म बाट आज सायद ठुलो भुल भयो मैले त्यस्तो भन्न हुन्थेन कि किन भावना तिमि किन रोएको के गल्ति गरे प्लिज मलाई भनन? म त तिमीसंग धेरै सपना देख्दै थिए।”
मेसेज पढेपछि मेरो आँखाबाट पनि आँशुको धारा बग्न थाल्यो। त्यहाँ उसले आफ्नो फोटोहरु पनि पठाएकी थिई। उनी १७ र १८ वर्षको हुँदा एक्सिडेनटमा परी उसले आफ्नो जिब्रो गुमाएकी रहिछ, जसले गर्दा ऊ बोल्न नसक्ने रहिछ।
म कहिले पनि भावनालाई भुल्न सक्दिनँ किनकि उनीसँग मैले धेरैधेरै सपनाहरु देखेको थिएँ। मलाई आफ्नै ती हजार सपनाहरुको धेरै माया लाग्दै छ, जुन कहिले पुरा नहुने गरि विलिन हुँदै थियो। फुल्नै नपाई मेरो माया ओइलाएको देखेर म धेरै नै निराश भएँ। भावनाको तस्बिर सधैँ मेरो मनमा सजाएको छु। अनि सधैं सजाउने छु, जुनी जुनीका लागि।